Quick Guide: Vatariri By Train From Paris To Nice | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Quick Guide: Vatariri By Train From Paris To Nice
Zvitima zveParis neNice zvakabatana neyekukurumidza uye inoshanda nzira yechitima saka kushanyira matunhu maviri kamwechete hakuna kumbobimwe nyore. Izvi zviviri zvakasiyana kumatunhu zvinokwezva zviuru zvevashanyi gore negore. Nice nhema ari mumwoyo hunoshamisa riviéra French kumaodzanyemba kweFrance. Paris ndiro guru uye kupfuura guta France, rakamiswa pamusoro rwizi Seine, kuchamhembe France. Zvakaoma kusarudza pakati kudanana guta Paris uye mumhenderekedzo yegungwa kunaka Nice, asi chitima kufamba, haufaniri kuita. Kuti tive nechokwadi mune kupfuura yevedza rwendo, tine shoma Mazano nokuti vaifamba nechitima kubva Paris kuti Nice.
Sarudza Chitima Chakanaka Kune Rwendo Rwako
nyanya, nezvitima zvose muFrance dziri nguva, akasununguka uye zvine akatemerwa mutengo. Kuenda kubva Paris kuna Nice munokwanisa kuenda zvakananga pamusoro Kutsanya nokukurumidza chitima akadai TGV chitima kana, iwe anogona nomumugwagwa kwaitora nguva emunharaunda nezvitima, pamwe mukana kuona mamwe nakisisa maguta unobatanidza. Munokwanisa kutora neusiku chitima. The TGV chitima Zara pakati 8 kuti 10 nguva pazuva kubva Paris Gare du Nord chiteshi kuenda Nice Ville chiteshi. Chitima ichi chinosvika kuNice munenge maawa mashanu. Iyo inomhanyisa bhazi yekubatanidza ichakuwana kubva kuParis kuenda kuNice mumaawa gumi nemaviri.
Funga nezve Kumira PaMaguta PaNzira KuNice
Iwe unogona kufamba zvakananga kubva kuParis kuenda kuNice nechitima kana kumira kumberi mumaguta anoshamisa eMarseilles neLyon panzvimbo iyoyo. Sarudzo ndeyako! kana uine imwe kupembedza nguva, funga kushanyira imwe, kana kunyange vaviri, wakanaka French maguta aya nzira yako kuna Nice kubva Paris. MuMarseilles iguta kumahombekombe ane dzakawanda vibe kuti inopa zvikuru nzvimbo dzokuona dzakanaka. Chiteshi chechitima chine mukwende lockers saka kumisa kubvisa pano kuti maawa mashoma kwaisagona nyore.
Uchanzwawo kupfuura Lyon kwako nzira Nice. Izvi guta rakabudirira uye chave and tinenge tichishandira zviripo kuongorora. guta rino ndiyo imwe nomusimboti rokuFrance unyanzvi uye nhoroondo uye anozivikanwa nokuda kwayo nyika-kirasi chili.
Bvumidza Kwenguva Yakareba Pachiteshi Paunofamba Kubva kuParis KuNice Nechitima
chitima dzemapurisa muParis vane makuru uye inogona kunyatsonanga dzinovhiringidza hamuna ikoko kana pamberi. Ivai nechokwadi kuti svika mangwanani kuti uzive kuti ipuratifomu ipi chitima chako ichasiya kubva.
Iwe zvakare uchazoda imwe nguva yekusimbisa yako tikiti usati waenda rwendo kunze kwekunge iwe watenga iyo paSave A Chitima. Kana iwe ukatenga matikiti ako kune ekare michina yeyero 'compostage de billets' ayo anowanzo kuve usati wasvika papuratifomu. Kana iwe uine tikiti yawakatenga neSave A Train, inisipekita pachitima pachayo inozoshanda uye woongorora kuti yako etiketi inoshanda pachitima.
Kufunga rokufambira nechitima kubva Paris kuna Nice? Enda ku Save A Train paIndaneti kutarisa zvese zvedu sanganisira fares uye kutanga urongwa yako inotevera ushingi! Kune akawanda emitengo yakadzikiswa inowanikwa munzvimbo dzakasiyana dzezvitima muFrance. iwe unogona zvakare kuchengeta tarisiro yezvazvino discounts nekutevera yedu Facebook uye Twitter mapeji zvakare.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-train-paris-nice%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Train Travel chitima kufamba Mazano travelfrance travelnice travelparis traveltips